आज अषाढ १५ (धान दिवस) दहि चिउरा खाने दिन ! – Vision Khabar
आज अषाढ १५ (धान दिवस) दहि चिउरा खाने दिन !
। १५ असार २०७५, शुक्रबार १९:१२ मा प्रकाशित
यसपाली नेपालमा बेलैदेखि बर्खा शुरु त भएको छ तर खेतहरुमा रोपाँईकालागि पानी कत्तिको जम्मा छ त ? डल्लाहरु फुटाइए त ? माटो सम्याईयो ? यसपाला के ले जोत्दै हुनुहुन्छ ? हल गोरु नै छन् या ट्याक्टरले ?
अरु धेरै प्रश्नहरु छन् है कृषीप्रधान देशका कृषीप्रेमी नेपालीहरुलाई सोध्नपर्ने । कुन धान रोप्दै हुनुहुन्छ ? कान्छी मन्सुली, बास्मती, घैया, करियाकामत, बगडी या अरुनै कुनै । असारको १५ को रौनकमा स्वागत छ, यसबर्ष पनि अरु बर्षहरु जस्तै काला बादलका मेघमलाहार, हिलो अनि हरियोका साथ असार आइपुगेको छ । असार अर्थात बिक्रम संवतको तेश्रो महीना, शाब्दिक अर्थ केलाउने हो भने असार ईरान भन्ने देशको लोरेस्टान जिल्लाको एउटा कृषीप्रधान गाँउ हो । स्मरण रहोस् नेपाली शब्दकोषमा ईरानी शब्दहरु आयामेली शब्दका रुपमा हामीले धेरै प्रयोग गर्दछौ, यसअर्थमा ईरान र देवनागिरी लिपीसँग पुरानो समबन्ध रहेको पुष्टि हुन्छ, असार शब्दको पृष्ठभुमीले पनि एउटा प्रमाण ईरानतर्फ देखाएको छ । अर्कोतर्फ ईस्लाम धर्ममा दिनहुँ गरिने ५ प्रार्थनामध्य एउटालाई अस्र भनिन्छ । ईजिप्ट भन्ने देशमा चाँही मृत्यूका देवतालाई ओसरिस असार भनिने रहेछ।
जे होस् असारलाई बुझ्न हामीले शब्दको शल्यक्रिया गरिरहन जरुरी छैन्, धान रोप्ने अनि मानो खाएर मुरी उब्जाउने यस महीना कृषीकार्यकालागि बिशिष्ट छ । असारको १५ लागेपछि बादलहरु पूर्णरुपले परिपक्क भएर पानीका धाराहरु बर्षाउदछन्, माटोहरु पानीमा रुझेर हिलोको स्वरुमा कमलो हुन्छ अनि तिनै कमलो माटोमा हामीले छुपुछुपु धानका बिरुवाहरु रोप्दछौ । यसैकारणले पनि होला असारको १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवसकारुपमा मानिन्छ है । सकेसम्म आज एकफेर धानको बिरुवा अनि हिलोसँग पौँठेजोरी खेलेर हेरौ, नेपाली परिवेशको जीवनशैली प्रकृती र माटोसँग अत्यन्त निकट छ है ।
हिलोसँग खेल्दै, पानीसँग पौँठेजोरी खोज्दै खेतका आलीमा चप्पल खोलेर खेत भित्र छुपु छुपु धान रोप्न छिरेका खेतालाहरुको खाजा पनि खेतमै ल्याइदिइने चलन छ । तराईतिर यसरी खेतमा खेतालालाई लगिदिएको खाजालाई जलखाई भनिन्छ, समामन्यतया जलखाईमा गहुँको पिठोको मोटो रोटी र नुन तेल खोर्सानी अचार आदी लगिदिने चलन छ । तराईतिर खेतका मालिक आफै धान रोपाँईमा खेत आईपुगे भने सबैजना खेतालाले जग्गाधनीलाई हिलो छ्यापेर भगाउने चलन छ ।
बर्खाको उत्कर्षको समय हो तर झरिका थोपाहरु कुनै पनि वर्ष सबैतिर समान भने हुँदैनन् । कहाँकहाँ पर्याप्त पानी पर्यो र कता कता पानी नपरेर धानको विऊ नै सुक्यो भन्ने कुराको फेरिहिस्त हरेक वर्ष फरक फरक हुनेगर्दछ । हरेक वर्षको असारे १५लाई राष्ट्रिय धान दिवसका रुपमा पनि मनाउने चलन छ । वर्ष २०७५ को धान दिवसमा स्वागत छ ।
यो गोड्ने, पानी लगाउने अनि उब्जा गर्ने साहस हामीसबै नेपालीहरुमा हुन जरुरी छ । जसरी असारे १५ मा स्वदेश बिदेश जता भएका नेपालीजनले पनि दहि च्यूरा खाने गर्दछन त्यस्तै दहि च्यूरासंगै कृषीकर्ममा आत्मनिर्भरता र माटो खोस्रने साहस आजको दिनले मागेको छ । अब जीवन धान्ने कृषी हैन व्यवसाहीक कृषी गर्ने दिन आएको छ, चामल आयात हैन निर्यातमा उच्चकोटीको देश भनेर नेपाल चिनिने समय आएको छ । इतिहास पल्टाएर हेर्दा १९७० को दशक अघि नेपाल विश्वका थोरै मात्र चामलका निर्यातकर्ता देशहरुमा गनिने पाइन्छ भने गएका केही दशकमा हामी सर्वाधिक आयातकर्ता भएका छौं । हामी आयात धेरै र निर्यात कम भएकले व्यापार घाटा सहन गरिरहेका छौं र बेलैमा कृषीकर्ममा ध्यान नदिने हो भने यसको परिणाम भविष्यका पुस्ताले भोग्नेछन् । दुई छाक खान र केही मानो बाँढ्न सबै नेपालीलाई पुगोस् । माटोको जय होस् ।
धान दिवसको शुभकामना !!